Maxaa ka jira dhimashada hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMaxaa ka jira dhimashada hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri?
Warbaahin kala duwan oo dhinaca internet-ka wax ku qora iyo wariyeyaal ayaa shaaciyay warar aan wali la xaqiijinin oo sheegaya geerida hoggaamiyaha shabakadda Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri, kaasoo ay sheegeen inuu muddo hal bil ah ka hor u geeriyooday “sababo dabiici ah.”
Warkan ayaa durba dhaliyay dood ku saabsan “sida wax looga qaban karo ururrada argagixisada iyo mustaqbalka kooxaha xagjirka ah”.
Wariyaha lagu magacaabo Xasan Xasan, ayuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee barta Twitterka ku shaaciyay qoraallo xiriir ah oo uu ku sheegay “in warkan uu ku dhex wareegayo ilo ku dhow dhow hoggaamiyaha Al-Qaacida, warbaahinta qaarna ayba ku tilmaameen mid la xaqiijiyay.”
Wuxuu intaas ku daray in shabakado hoos taga Al-Qaacidda, oo uu ka mid yahay ururka la magac baxay “Ilaaliyeyaasha Diinta”, oo ah garab hubeysan oo ka tirsan Al-Qaacidada Suuriya, ay ku dhawaaqeen dhimashada Ayman al-Zawahiri.
Rita Katz, oo ah agaasimaha bogga internet-ka ee SITE, oo ah website la socda dhaqdhaqaaqa ururrada xagjirka ah, ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraallo badan oo ku saabsan warka sii faafaya ee la xiriira in hoggaamiyaha Al-Qaacida uu geeriyooday muddo bil ah ka hor, uuna u dhintay xanuun caadi ah. Laakiin waxay intaas ku dartay “in hayaddeedu aysan arrintaas wali si rasmi ah u xaqiijinin.”
Ma aha markii ugu horreysay ee la shaaciyo geerida qof caan ah oo ka tirsan shabakadda Al-Qaacidda, in muddo ah ayaana shaki laga muujinayay xaaladda caafimaad ee Al-Zawahiri.
Rita Katz waxay dib usoo celisay xasuusta ku saabsan marar badan oo ay warbaahinta ku dhawaaqeen dhimashada hoogaamiyeyaal caan ka ah kooxdaas, AlQaacidana ma aysan xaqiijinin ilaa ay dhowr bilood kasoo wareegtaan.
Waxay tiri: “Ururku wuxuu mar walba isku dayaa inuu qariyo dhimashada hoggaamiyeyaashiisa, mana xaqiijiyo ilaa laga gaadho waqtiga ku haboon.”
Wali ma cadda cidda baddali doonta al-Zawahiri, haddiiba geeridiisa la xaqiijiyo, sida ay sheegtay Rita Katz.
Ninkii labaad ee al-aacidda ka tirsan oo dhinta
Inkastoo aan wali la hubin warka ku saabsan geerida Al-Zawahiri, waxaa jiray warar iskhilaafsanaa oo sheegayay dhimashada hoggaamiyihii labaad ee IS, oo ku dhintay Iiraan. Warkaas oo lagu tilmaamay mid xaqiiqo ah ayaa si weyn loogu hadal hayay baraha bulshada.
Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha carabta ayaa abuuray dood ku saabsan in dhimashada Al-Zawahiri “ay aad u wiiqi karto saameynta ay ururrada xagjirka ah ku leeyihiin gobolka.”
Qaar kalena waxay ku adkeysteen in dhimashada Al-Zawahiri ay wax saameyn ah keeni karto, iyagoo ku doodaya in ururka Al-Qaacida uu horayba u wiiqmay markii la dilay hoggaamiyahoodii Usaama Bin Laadin.
Falanqeeyayaal kalena waxay sheegeen in dowladda Mareykanka ay Al-Qaacidda iska indho tirtay markii uu hoggaankeeda la wareegay Al-Zawahiri, sanadkii 2011-kii.
Warka ku saabsan geeridiisa ayaa soo baxay xilli wargeyska New York Times uu shaaciyay dhimashada ninkii labaad ee hadda ugu sarreeyay Al-Qaacida.
Wargeyska, oo soo xiganayay saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka, ayaa sheegay in “Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi, oo lagu naaneyso Abu Muhammad al-Masri, oo lagu eedeeyay inuu wax ka qorsheeyay qaraxyadii laga fuliyay safaaradaha Mareykanka ee Afrika 1998-kii, lagu dilay dalka Iiraan 7-dii bishii August. Dilkiisa waxaa fuliyay sirdoonka Israa’iil, sida uu wargeysku sheegay.
Hase yeeshee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa beenisay sheegashada New York Times, waxayna ku tilmaantay war been abuur ah.
Waa kuma Al-Zawahiri?
Waxaa lagu tilmaami jiray inuu gacanta midig u ahaa Usaama Bin Laadin, uuna wax badan ka abuuray fikradda uu ku dhisnaa ururka Al-Qaacida.